၏အကောင်းဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 2013 ! - သတင်း Rule
၏အကောင်းဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 2013 !
တစ်နှစ်တာ 2013 စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အများအပြားမှတျသားဖှယျထိုးဖောက်သို့မဟုတ်တီထွင်မှုမြင်ကြပြီမဟုတ်စေခြင်းငှါ,, ယခုနှစ်အဆင့်မြှင့်မော်ဒယ်တွေနဲ့လန်းဆန်းဒီဇိုင်းများဒါပေမဲ့ဘာမှမကယ်မနှုတ်ရန်ပျက်ကွက်နှင့်အတူ. သို့သော်ယခုနှစ်ဇာတ်ဆောင်၏၎င်း၏တရားမျှတတဲ့ဝေစုမသွင်းခဲ့ဟုမဆိုလိုပါ, လျော့နည်းသမားရိုးကျပစ္စည်းတွေနှင့်တစ်ဦးဖော်ပြထားခြင်းကိုခံထိုက်သောသူပုံမှန်မဟုတ်သော devices များ.
ဘလူးတုသ်-enabled smartpens မှစ. app ကို-ထိန်းချုပ်ထားဖို့ အလင်း မီးသီးများ, ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးတချို့ရှိနေပါတယ်, အဘယ်သူမျှမအထူးသဖြင့်အမိန့်ရှိ.
အဆိုပါ Livescribe3pad ပါကလောင်နဲ့ ipad
အဆိုပါ Livescribe3Smartpen တာတော့သေချာတယ်ထဲကလာရန်အငြိမ်ဆုံးပဲပစ္စည်းတွေတစ်ခုဖြစ်ပါသည် 2013, ဝါကြွားခြင်း-takers သတိပြုပါဆိုလိုသောသူအချို့ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ features တွေကိုနောက်တဖန်အရေးပါသောကိုးကားလက်လွတ်ဖို့ရှိသည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်.
အဆိုပါ တတိယကြားမှာဆောင်းဦးရာသီအတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်, အချို့သောအဓိကအပြောင်းအလဲများအရည်အသွေးကို. အဆိုပါ smartpen, သောက၎င်း၏ user ကယင်ကောင်ပေါ်မှာခြစ်လိုက်တာနဲ့ခိုင်းနှိုင်းခြင်းနှင့်ကော်ပီကူးသည်အတိုင်းတစ် note ကိုယူမှ၎င်း၏စွမ်းရည်များအတွက်လူသိများသည်, ဒီယခုဘလူးတုသ်စမတ် LE နည်းပညာကို အသုံးပြု. ပါဘူး, အထူးအပေါ်ရေးထားသမျှသောအရာအားလုံးကိုပို့ဆောင်Livescribe dot စက္ကူ တစ်ဦး Livescribe + app တွေကနေတဆင့်တစ်ဦးကို iOS device ကိုမှ.
Livescribe3နှစ်ဦးဗားရှင်းအတွက်ရရှိနိုင်, £ 129,99 ဘို့တ, သော 50-စာရွက် starter နှင့်အတူ smartpen လည်းပါဝင်သည် မှတ်ချက်စာအုပ်, အဖြစ်ကောင်းစွာတစ် microUSB charging cable ကိုနှင့်အနက်ရောင်အဖြိုက်နက်-carbide လတ်ပျဉ်းမှင်သည့်အရာတစ်ခုအဖြစ်. £ 169,99 မှာစျေးနှုန်း, အ Livescribe Smartpen3Pro ကို Edition ကို 100 စာရွက် hardbound ဂျာနယ်နှင့်အတူသားရေ Smartpen အစုစုတို့ပါဝင်သည်, Evernote ပရီမီယံမှတစ်ဦးတည်းနှစ်ကြေးပေးသွင်း, တစ်ဦးအားသွင်း cable ကိုတစ်ခုနှင့်နောက်ထပ်မှင်ကျည်တောင့်.
Philips က Hue lightstrips နှင့်ပွင့်လန်း update ကို
ဒတျချြ အီလက်ထရွန်းနစ် ခိုင်မာသော Philips က နောက်ကျောနှောင်းပိုင်းတွင်၎င်း၏ LED ဒစ်ဂျစ်တယ်အလင်းရောင်စနစ်က Hue စတင် 2012, သို့သော်သူကနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်သည်အထိမဟုတ်ခဲ့ 2013 အ gadget ကယ့်ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သို့လာသည်ကို.
အင်တာနက် router ကိုမှတက် hooks တဲ့ Wi-Fi တံတားမှတဆင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ကထိန်းချုပ်ထား, ထို LED မီးသီးအသုံးပြုသူများအများ၏အရောင်ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြု အလင်းရောင် iOS ကိုသို့မဟုတ်အပေါ် app တစ်ခုကနေတစ်ဆင့်မတူညီတဲ့စိတ်ခံစားမှုအဘို့အပတ်ဝန်းကျင်မှာ Android မှာ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်.
ဒီနှစ်, Philips ကစမတ်ဖုန်းထိန်းချုပ်ထားသောစနစ်အပိုဆောင်းအလင်းရောင်ရွေးချယ်စရာကဆက်ပြောသည် နှင့်တစ်ဦးအင်္ဂါရပ်လို့ခေါ်ကြတယ် “Hue ၏သူငယ်ချင်းများ”. အဆိုပါဖြည့်စွက်များမှာLivingcolours Bloom အလင်းအိမ်နှင့် Livingcolours Lightstrips, အကထိန်းချုပ်ထားကြသည်မီးသီး၏ကွဲပြားခြားနားသောအပွောငျးအလဲနှင့်ပုံစံမျိုးစုံသောများမှာ hue ကွဲပြားခြားနားသောကယ်နှုတ်ပလီကေးရှင်း, အိမ်တွင်ပိုပြီးတက်ကြွတဲ့အလင်းရောင်စနစ်များ.
မှမီးသီးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားစရာအရာ Philips ကဘယ်ဘက်ပြီဖြစ်ပါတယ် software development ကိရိယာအစုံ (SDK ကို) ထိုအလင်းရောင်အနာဂတ် apps များအတွက်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် developer များအဘို့အဖွင့်လှစ်, ဖြစ်နိုင်သမျှတီထွင်မှုတစ်ခုအိမ်ရှင်များအတွက်နည်းပညာကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်.
Gmax 3D 3D ပရင်တာခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပုံနှိပ်
Gmax 3D ပရင်တာ
3: D ပရင်တာမရှိနည်းလမ်းဖြင့်သစ်တစ်ခုတီထွင်ကြသည် - အစောပိုင်းဗားရှင်းကျော 1980 မှခြေရာခံနိုင်ပါတယ်. သို့သော်ထိုသို့သင်ထို့နောက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အများကြီးပိုကြီးတဲ့ 3D ပရင်တာဒီဇိုင်းနှင့် print တစ်ခု 3D ပရင်တာကိုတည်ဆောက်ခဲ့သူတစ်စုံတစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်နေ့တိုင်းမဖွင့်, သောထို့နောက်ထို့နောက်အဖြစ် Flat-pack ကိုတည်ဆောက်-It-ကိုယ့်ကိုယ်ကို 41x41x23cm တစ်ပိုကြီး-ထက်ပျမ်းမျှအားတည်ဆောက် volume ၏နိုင်စွမ်းများပိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုထုတ်ကုန်ပယ်တင်ပို့ကြသည်ဟု ပို. ပင် 3D ပရင်တာ print ထုတ်ရန်အသုံးပြုသည်.
ကျွန်တော်ပရင်တာရဲ့ဒီဇိုင်နာနှင့်အတူတွေ့သောအခါအဆိုပါ Inquirer မှာပထမဦးဆုံးကဒီမှာတှေ့မွငျရ Gordon ကမြင်ပါတယ် LaPlante, ယခုနှစ်အစောပိုင်းကသူ့ရဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံအဆင့်အတွင်းကို Gmax ပြသတဲ့သူ, ဘရွတ်ကလင်းရှိသူ၏ဧည့်ခန်းဒီဇိုင်းစတူဒီယိုထဲမှာ, ပြား-pack ကို 3D ပရင်တာကိရိယာအစုံယခုမှအ Kickstarter ကပေမယ့ website တွင်ဝယ်ဖို့ရရှိနိုင်ပါသည် $1,095.
LaPlante အရန်ကင်း Gmax စုဝေးရန်အလွန်လွယ်ကူသည်, ဝယ်လက်ဖို့သာလိုအပ်အဖြစ် “အတွက်ဆလိုက်များနှင့်ဝက်အူ” အပိုင်းပိုင်းအတူတူ. ဒါဟာကိုယ့်သေးသင့် local Maplin store မှာရရှိနိုင်မဖြစ်စေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဆုံးနဲ့ဆန်းသစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲကတစ်ခုဖွင့် 2013.
The NUC itself is by no means brand new, ဒါပေမဲ့ what this year brought us was the addition of Intel’s fourth-generation Haswell processor in the same compact form factor, making the NUC just as tiny and versatile but with more power and even lower energy consumption. There are also two SO-DIMM slots for support of up toamassive 16GB of DDR3 memory.
We can’t say health and fitness gadgets usually gain much attention here atအဆိုပါ Inquirer. But when we heard about the Check training gadget ယခုနှစ်အစောပိုင်းက, we made an exception.
Check communicates over Bluetooth LE to an iOS or Android မှာ device and when you hit the “new assessment” icon in the app it will sendalow-voltage current through your body in order to stimulate the nerve-muscle connection and tell you if your body is ready foraday of training or not.
Not only an innovative product but an innovation in technology, လွန်း, ထိုOrbitsound SB60 Airsound Base is an all-in-one subwoofer and soundbar system built on the company’s patented “Airsound” နည်းပညာကို.
Measuring around the same asasingle iPad laid flat, the Powerdock5isamulti-charge point for all your i-devices, giving youaplace to store and charge five gadgets at one time, fromasingle စွမ်းအား source. As long as there’saUSB cable to charge it, the Powerdock will handle it. It’s the perfect charging solution for small offices or work groups, orafamily full ofAndroid မှာ, Windows ကို or iOS device users.
Another one of life annoyances: even inamodern age of 3D printers and wearable devices, remembering where you put your keys can sometimes proveachallenge. It’sagood job that this year Elgato devisedagadget for this predicament, ထိုအခါ, ဒါကြောင့်မဖြစ်.
The Smart Key is essentiallyaBluetooth-enabled fob that, unlike rival devices, uses Bluetooth Smart နည်းပညာကို in conjunction with recent software upgrades in iOS 7, to promiseareliable, consistent and versatile gadget-finder.
Working alongside an iOS app that acts asacommand centre, the fob can be attached to anything you like – not just keys, နာမတျောအအကြံပြုအဖြစ်. It can be synced via the app underaname corresponding to whatever it is attached to: “handbag”, “suitcase”, “keys”, စသည်တို့ကို. If you leave something behind, the app will notify you accordingly, seeing that you never leave your valuable possessions behind again.
အဆိုပါ Smart Key fob is available now for £40.
Adobe က announced in September that it would takeaserious step into hardware for the first time, and bring the internet-connected stylus experiment Project Mighty to production, along withaaccompanying digital ruler called Project Napoleon.
Withathree-sided twist for better ergonomicsduring use, the stylus hasanotification LED built into the end that emitsarange of colours to signify information such as battery status and data transfer. The stylus is encircled with sensors so it can be charged inaယူအက်​​စ်ဘီ charging dock.
They might not have becomeapurchasable reality yet, but the drawing tools – which are aimed at those in the ပုံစံ industry who are looking for tablet and စမတ်ဖုန်း accessories – offer an enhanced alternative to pencil and paper drawing.
2013 marked the first year that Google ဖန် becameatangible product; from mere prototype hype and mock videos in 2012, to something we could test out and use, albeit in an environment controlled by Google. But that didn’t mean we weren’t eager to get our mitts on the highly anticipated spectacles when we were invited to try them out back in summer.
Korean hardware firm LG က is perhaps best known for its substantial line-up of smart TVs, monitors and စမတ်ဖုန်းများ. But that all changed earlier this year when the company unveiledarather unusual device, claiming to be the smallest and lightest mobile photo printer on the market.
The idea of augmented reality နှင့် gesture control proved ever-more popular in 2013, with more manufacturers integrating it into their products.
Love it or hate it, Leap Motion was the first to give those who don’t already own gesture-controlled devices the option of suchatechnology. Its Leap Motion Controllerturns any PC withaယူအက်​​စ်ဘီ port intoa3D motion-activated computer for just £70.
အဆိုပါ device allows people to control their computers with hand and finger movements, claiming to sense gestures made by your hands “the way you move them naturally”. Working withမက် computers and PCs, the 3in device is powered by USB and downloadable software.
It also tracks all 10 fingers up to 1/100th ofamillimetre with zero visible latency, leaving your hands free to move in eight cubic feet of interactive, 3D space. It’saneat and unique little gadget, which also comes with Airspace, the Leap Motion app store that is said to contain more than 75 applications such as paint programs and games built by developers and designed specifically forLeap Motion နည်းပညာကို. A welcome addition to the year’s line-up of quirky and unique gadgets. မီတာ
ဤဆောင်ပါး, The best gadgets of 2013, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် အဆိုပါ Inquirer နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်.
31742	0 စီးပွားရေးနှင့်စီးပွားရေး, ခရစ္စမတ်, အီလက်ထရောနစ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, Griffin, Inquirer, Powerdock 5, စျေးဝယ်
← ကင်မရွန် '' မို’ အီးယူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအပေါ် Lech Walesa ကပြောပါတယ် 10 ဆံပင်ကြီးထွားမှုများအတွက်ထိရောက်သောဆေးဝါးများ →